बालुवा संकलनमा फरकफरक रसिद प्रयोग - Awajonline Online Newspaper
बालुवा संकलनमा फरकफरक रसिद प्रयोग
आवाज संवाददाता १२ फाल्गुन २०७४, शनिबार
मैनापोखरी, १२ फागुन
बैतेश्वर गाउँपालिकाले स्थानीय कर संकलनका लागि फरकफरक रसिद प्रयोग गरेको पाइएको छ । बैतेश्वर गाउँपालिकाले वडा नं. ८ नागदहबाट ढुङ्गा, गिटी ल्याउने गाडीहरुलाई फरकफरक रसिद दिने गरेको भेटिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको रसिदका अतिरिक्त रसिदबाट समेत कर संकलन गरेको देखिएको हो । ढुङ्गा, गिटी ल्याउन गाडी चालक र व्यवसायीहरुले नै फरकफरक रसिद देखाएपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
बैतेश्वर गाउँपालिकाले गत मंसिर १६ गतेदेखि वडा नं. ८ नागदह क्षेत्र तामाकोसी नदीबाट बालुवा गिटी उत्खनन् गरी निकासी गर्न थालेको हो । क्षेत्रपादेखि नयाँ सडक नदी किनारसम्म खुलेकाले ठेक्का बन्दोबस्ती ढिलाइ भएकाले तत्काल वडा कार्यालयलाई रसिद पठाएर कर संकलन गर्न गाउँपालिकाले लगाएको हो । तर वडा कार्यालयले फागुन पहिलो सातासम्म करबाट संकलित रकम दाखिला नगरेको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।
रसिद सकिएर माग गर्दा रसिद नदिएको भन्दै वडा कार्यालयले आफ्नै छाप लगाएर २०७४ फागुन ४, ५ र ६ गते ३ दिन पुरानो रसिद फोटोकपी गरी चलाएको देखिएको छ । नयाँ रसिद पनि गाउँपालिकाले नपाएपछि बाध्य भएर ३ दिन एक सयवटा रसिद फोटोकपी गरेर चलाएको वडा अध्यक्ष रमेश अधिकारीले दाबी गरे । फोटोकपी पनि चलाउन नदिएको र नयाँ रसिद पनि नपठाएपछि फागुन ७ गते यता कर संकलन हुन छाडेको छ ।
गाउँपालिका स्रोतले भने सुरुदेखिको अर्धकट्टी सहित उठेको कर दाखिला गर्न फागनु ६ गते वडा कार्यालयलाई ताकेता गरेको छ । वडाध्यक्ष अधिकारीले भने उठेको कर बापतको रकम गाउँपालिकाको खातामा दाखिला भई सकेको बताए । तर गाउँपालिकाले पठाएको रसिदभन्दा अघि नै साविक काब्रे गाविसले प्रयोग गरेको रसिदबाट समेत कर संकलन भएको भेटिएको छ ।
गाउँपालिकाबाट पठाएको रसिदको त अर्धकट्टी हिसावबाट रकम हिसाव संकलन गर्न सकिन्छ । फरकफरक रसिद भेटिएपछि कर संकलन अनियन्त्रित भएको आशंका भएको छ । बैतेश्वर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नवराज पराजुलीले सुरुदेखिको रसिदको अर्धकट्टीको हिसाव नआएपछि कर दाखिला गर्न ताकेता पत्र पठाएको तर अन्य विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए । कर संकलनका लागि गाउँपालिकाले छुट्टै कर्मचारी नराखेपछि ८ नं. वडा कार्यालयले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।